Amensty oo kubaaqday baaritaan lagu sameeyo haweenay rayid ah oo ciidanka Mozambique toogteen - Tilmaan Media
Hay’adda udooqa xuquuqda aadanaha Amnesty International ayaa dowladda Mozambique ugu baaqday in baaritaan lagu sameeyo muuqaal muujinaya haweenay xaamilo ah, dharka laga bixiyay oo ciidamada dowladdu si sharci darro ah u tooganayaan.
Muuqaal lasoo dhigay internetka ayaa muujiyay niman kulabisan dharka millatariga oo garaacaya haweenay ay ku eedeeyeen inay xubin katahay kooxda Alshabaab ee dowladda dagaalka kula jirta. Ciidanka ayaa dhabarka katoogtay haweenayda iyadoo isku dayaysa inay baxsato.
Dilka ayaa kadhacay gobolka Cabo Delgado oo uu kasocdo dagaal u dhaxeeya ciidanka dowladda kooxo fallaago ah. Gobolka ayaa ah mid qani ku ah gaaska waxaana ka shaqeeya shirkado caalami ah oo ay kamid tahay Total.
Tan iyo intii dagaalada udambeeyay bilawdeen waxaa jirtay eedaymo loo soo jeediyay ciidama dowladda, waxaa lagu eedeeyay in dad rayid ah loo dilay si sharci darro ah.
Wasiirka arrimaha gudaha Amade Miquidade ayaa sheegay in nimanka dilka gaystay aysan katirsanayn ciidamada dowladda, wuxuu sheegay inay ahaayeen dad loo xirtay dhar u eg kuwa ciidanka.